Umhla My Pet » Ezine Iintlobo babantu Women Go Kuba
ukubuyekezwa: Oct. 21 2020 | 3 min ukufunda
Undoqo entliziyweni yomntu andiyityhilelwanga isisu sakhe. Oko engqondweni yakhe. Ukusetyenziswa ngezengqondo ngoqwalaselo kuphumelela na umfo amaphupha yakho kwaye ikhokelele romance elifutshane okanye ulonwabo olungasoze. Nayiphi na ukhangela ngeli xesha ebomini bakho. Ukuzazi ubuntu babo yaye yintoni emenza aphumelele ngundoqo kwaye endaweni uyakwazi kunokukhokelela ngokuqinileyo entliziyweni yabo. Ngezantsi kukho iindidi ezine mens’ abantu nendlela ungenza ukuba elakho umntu.
Lo mfo kuhle na uhlobo mfo welusa ukuba abantu abaninzi ebomini bakhe. Kunokuba uhlobo kufana ukunye nomntu ngokulandelwa. Ngoko ke ngenxa ukuze abe phantsi umyalelo echola kwihlabathi lakhe. Imbonakalo zibaluleke kakhulu mfo cool. Nokuba ke zamvanje ufake okanye uthabatha angayenzi anti-leefashoni mfo kuhle uhamba ngokuzithemba ngamaxesha onke kwaye kwibhoda phezu kwama-ukuzithemba ngamaxesha. Umfana kuhle uthanda ukuba iziko ingqalelo kwaye akayi ungathanda ukuba upstage ukuze abe ingqalelo. guys Cool njengezinye guys kuhle namantombazana asirhawule ngokwabo nabantu kuhle ngoko ukuba iimpawu ungamlahli zama ukubonisa kubo kwinkampani yakhe de nguye ilithanda gqitha ukuba wayesuke abangenako ukuba wena ebomini bakhe ngokuqinisekileyo musani sizibonakalise phambi kubahlobo bakhe! amatyendyana Cool badla ukuphulaphula ngaphezulu nabahlobo babo kunabo ngenxa yokuba abanye abantu’ izimvo njengoko iindaba phezu isigwebo zabo ukuze ukuba singalahlekani ubuso.
I-High elungqamekweni Bloke
Elungqamekweni high mfo na uhlobo mfo osoloko ekhangela dapper kwaye mhlawumbi isuti. Lowo udla ukuthetha ngezinto ayicacanga kumculo, uncwadi, etc … kodwa veers kungena angayithandiyo izinto lukhuni ngakumbi izinto ayicacanga kwezi nkalo. Oku kungenxa yokuba kakhulu efanelekileyo okanye ubuncinane nantso into ungathanda avele: ngokwasengqondweni eyiyo. Ngokufanayo dude cool
imbonakalo zibalulekile elungqamekweni Bloke eliphezulu. Kukho ibonakala element snobbish kakhulu ukuba olu hlobo lomntu. INYANI TV kunye izinto ezifana yinkcitha xesha kuye. Ukuze ufumane enye indoda enjengale kuya kufuneka ukuba ukuhlaziya ulwazi lwakho inzulu, ukunxiba ngokulula ezintle. Kodwa zama ukuba babe snobbish kwinkqubo. Khumbula ukuba ukuthandana osuka ngaphandle ibe osuka ngokwakho. Esinye seziqalelo ukuqwalasela kunye elungqamekweni eliphezulu Bloke lisitya. Yena akayi kubanjiswa ufile kwindawo cafe nokutya cheap okanye MacDonalds. Mhlawumbi kuba ngakumbi nokutya okanye yeTapas bar ubuya ziphelela naye.
Inkwenkwe-elandelayo-cango lakho licocekile-cut, guy elithozamisayo. Uyakuthanda kusela, kodwa ungayibaxi kwaye usuka ungathanda umculo eziqhelekileyo kakhulu, TV, etc … Le mpazamo ngenkwenkwe-elilandelayo-umnyango yeyokuba bonke ubumnandi kwaye ukukhanya leyo mhlawumbi eyayibubuvuvu. Ababa iniqubule. mhlawumbi kukho icala obubi khona apho babonisa kuwe kuphela ngasese. Ngethemba kwi lokulala ngenxa yenu! Mabadane, babe bona kwaye musa ukuzama ukutshintsha abo na kodwa ukuba uvakalelwa ukuba zimele emva umfanekiso wabo ekhuselekileyo bengavumeli ukuzeyisa wazo ngaphandle ummandla njengoko amaxesha kunjalo kakhulu amakhwenkwe-olandelayo-umnyango uze ubakhuthaze ngobunono ukuba benze njalo ngokubonisa ukuba ufuna ngokwenene nabo yaye baya kakhulu. Kodwa musa ukutyhala nzima kakhulu ngenxa yokuba kufuneka kwenziwe ngesantya zabo njengoko kunzima ukuba uzithanda phandle phaya.
Olu nengqondi uyafana elungqamekweni Bloke eziphakamileyo ngengqiqo lokwazi kakhulu izinto ezichanileyo. Nangona kunjalo nengqondi ithande ukuba ungathanda ukuba uthanda njengoko kuchasiwe abangayithandiyo izinto zibonisa okanye ukubonisa ukuba krelekrele ngayo. Ke ezo zinto abangenagama badla zonke posh eyiyo. Olu nengqondi ngokunyanisekileyo kakhulu kwaye Imbonakalo yazo zonke izinto ezibalulekileyo. Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo ingqondi ukusuka reda ukuba amahippie ukuba Whovians (Doctor Ngubani iifeni) nababukeli Sci-Fi. Ngabantu umdla kakhulu kodwa zidla bawela kuba abantu bacinga Iingqondi lithemba ngenxa romance leyo bacinga. Iingqondi njengoko lithi njengoko nabani na ongomnye uze umthande ukufumana incoko okulungileyo kwiqabane. Kukho udla kudinisa ukuba nengqondi kuba kaninzi ingqondi ziye wabeka phantsi ngaphambili. Nabani waqonda ezahlukileyo linaso kakhulu ukukunyamezela oko ekufumaneni indawo trust kunokuba nzima. Ngokuqhelekileyo ingqondi badla umhla ingqondi kuba bekhululekile ibe ngokwabo nabo kodwa ukuba unako akulinge zivulelekile-ephangaleleyo oku kukhokelela umdla, ukonwaba, nolwalamano nokuthantamisa kwaye intle.
3 Izinto Ofanele Uzazi Ukuba ufuna ukwenza